भोली माघ ०१ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल – Khabar PatrikaNp
भोली माघ ०१ गते बुधबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
January 13, 2021 136
बिहानको समय मध्ययम रहेकोले आफन्त तथा अग्रजसँग मनमुटाब बढ्ने योग रहेको छ । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले परिवारका साथ मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
नयाँ योजना केहि दिनका लागी थाती राख्नुहोला । सहयोगी तथा आफन्तले हात झिक्नाले समस्या बढ्नेछ । धर्म सस्कृती तथा रितिरिवाज जोगाउन समय खर्चिदा राम्रो रहेको छ । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा पछि परिने चिन्ताले सताउनेछ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले भौतिक सम्पती तथा सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । आफुले मन पराएको मानिससँग रमाईलो यात्रा गर्न सकिने छ । गोप्य सुचनाहरु बहिरिने हुँदा ईज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ, ध्यान दिनुहोला ।
एकल तथा साझेदारि व्यवसायबाट थोरै भएपनि नाँफा कमाउन सकिनेछ । साथिभाईहरु बीच मित्रताको बन्धन कसिलो भएर जानेछ भने माया प्रेम नजिक हुन सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना विचारहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
बिहानको समय मध्ययम रहेकोले अध्ययनमा मन जाने छैन भने प्रतिस्पर्धीहरु हावी हुनेछन् । खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या आई औषधी उपचार खर्च बढेर जानेछ । मामा मावली पक्षबाट पनि सहयोग पाईने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ ।
हतार गरेर गरिने कुनैपनि कामको नतिजा राम्रो नआउने हुनाले काम गर्दा ख्याल गर्नुहोला । खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्य तथा पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ । उपहार प्राप्तीको योग भएपनि टरेर जानेछ । माया प्रेममा सामान्य बिवाद हुनेछ ।
आफन्त तथा मन पर्ने साथिकासाथ छोटो,रमाईलो तथा अर्थपूर्ण यात्रा हुने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईँकै पक्षमा हुनेछन् भने प्रतिस्पर्धीहरुलाई किनारा लगाउन सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले सकारात्मक नतिजा हात पर्नेछ ।
बिहानको समय मध्ययम रहेकोले सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा कुटुम्बसँग सामान्य कुरामा मनमुटाब सिर्जना हुनेछ । मध्यान्हबाट समय राम्रो रहेकोले छोटो दुरिको लाभदायी यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले राजनीति तथा खेलकुदमा समय खर्चिने हरुका लागी समय उत्तम रहेको छ । सुन्दर पहिरमा सजिएर अरुको मन लोभ्याउन सकिनेछ । माया प्रेममा सामान्य मनमुटाब भएपनि अन्तत सौहार्दपूर्ण वातावरणमा समय व्यातित हुनेछ ।
तपाईँको चुम्बकिय ब्यात्तित्वले सबैको मन तान्नेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानिका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् । पारिवारिक माहोलमा मिष्टान्न भोजन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । सहयोगिहरुबाट आर्थिक लाभ हुनेछ भने उपहार प्राप्तिको योग रहेको छ ।
बिहानको समय राम्रो रहेकोले निर्माण सामाग्रीहरुको व्यापारमा बृद्धि हुने तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । अध्ययनमा मन जानेछ । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ भने सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुहोला ।
पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट भनेजस्तो लाभ लिन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगती हुनेछ भने बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा तपाईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । ठूलाबडाको सहयोगले रोकिएको कामहरु बन्न सक्छ । आत्मबल बढ्नेछ भने शत्रुहरू पराजित हुनेछन् ।
Prevबाबुले घरमा आगो लगाउँदा दुई छोराको मृ,त्यु,
Nextमाघ ०१ गते बिहिबार , यस्तो छ तपाईको राशिफल
फेरी कञ्चनपुर को जङ्गलमा रहस्यमय घटना
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ
पतिको ज्यान लिएर शव लुकाउन खोजिन्, नसकेपछि देह त्याग गरिन् टोखा घटनामा अर्को खुलासा
आफ्नो दृष्टिबिहिन बा-आमाले स्कुल फि तिर्न नसकेपछि, ५ बर्षका बालक रत्नपार्कमा गीत गाउँदै । अशोक दर्जीको जस्तै मिठो आवाज (भिडियो हेर्नुस)
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33668)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33342)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (29027)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27309)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25159)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22515)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21178)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (20829)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20097)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19494)
सोलुखुम्बुमा टिपर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु
बुवाले दिएको मिर्गौलाले उनको शरीरमा १५ मिनेटभन्दा बढी काम नगरेपछि
यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको दुबई का’ण्ड भन्दै भिडियो भयो भाईरल (भिडियो हेर्नुहोस)
मलेसियामा ८ नेपाली श्रमिकको मृ’त्यु, ती मध्य ५ जना’को मृ’त्यु आ’त्म’ह’त्या !
रुपन्देहीमा पाँच वर्षीया बालिका बला’त्कृत, खोल्सामा भेटिएकी बालिकाको अवस्था गम्भीर